Nke a nwere ike ịbụ smartwatch ị na-eche ịzụta otu | Akụkọ akụrụngwa
Smartwatches bịara n'ahịa ahụ maka Pebble kwụsịrị, ụlọ ọrụ ahụ ọ maghị otú ọ ga-esi gbanwee ka ọgbọ ọhụrụ nke smartwatches na ọ bụ Fitbit zụtara ya n’ikpeazụ, ka o were ihe niile gbasara ikikere ya na teknụzụ ha nwere n’aha ha mana ha amaghị ka ha ga-esi wee rie uru.
Mgbe Pebble gasịrị, ha malitere ịbịaru mbụ smartwatches na a na agba na ihuenyo mmetụ. Nsogbu nke ọtụtụ ndị ọrụ na-eche ihu bụ obere nha ihuenyo, nke ọ na-anaghị ekwe omume mgbe ụfọdụ ịmekọrịta, n'agbanyeghị na ị nwara ọtụtụ ụdị dị ka nke m, ị ga-emecha mara gị. Ọ bụrụ nha ihu igwe dị gị mkpa, LumiWatch nwere ike ịbụ smartwatch ị na-achọ.
Ọtụtụ ndidi echiche ndị na-egosi na ahịa na-adịbeghị anya, echiche ndị na-egosi anyị interface nke ama anyị gosipụtara na aka anyị. Mahadum Carnegie Mellon mepụtara ihe ngosi nke ihe nwere ike ịbụ nke mbụ smartwatch na laser projector, a projector nke ga-ahụ maka igosi interface na aka anyị ka anyị nwee ike ịmekọrịta ya n'ụzọ dị mfe karịa ka anyị jiri ụdị ugbu a.
LumiWatch na-abanye n'ime 15 lumens laser projector, nchapụta karịa iji nwee ike igosi interface nke ngwaọrụ ma soro ya rụọ ọrụ. N'ime, anyị na-ahụ batrị mAh 740 (nke dị elu karịa nke nke smartwatches nke oge a na-enye), yana ihe nhazi 4 GHz Qualcomm 1,2-core, 768 MB Ram na nchekwa 4 GB. Ọ nwekwara njikọ Bluetooth na Wi-Fi. Dabere na ndị otu si Mahadum Carnegie Mellon, ụdị a nwere ike inwe ọnụahịa ahịa nke $ 600, okpukpu abụọ ọnụ ahịa nke anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ ụdị ndị ama ama n'ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Nke a nwere ike ịbụ smartwatch ị na-eche ịzụta otu
Teknụzụ a na-enye anyị ohere ihulata ma gbatịa diamond, otu n'ime ihe kachasị sie ike iji soro ụwa rụọ ọrụ.